संसारकै सबैभन्दा छा:डा बिबाह (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – Life Nepali
संसारकै सबैभन्दा छा:डा बिबाह (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
काठमाडौं । हरेक मानब जिवनका लागि बिवाह महत्वपूर्ण क्षण हो । यसले नयाँ जीवनको सुरुवात भएको अनुभव गरिन्छ । बिबाहमा खु:शी नहुँने सायदै कम हुन्छन् । बच्चादेखि नै हरेक मानिसको सपना जीवन राम्रो ल्याउँने । खु:शी जीवन विताउँने । समाजको गन्ने मान्ने हुने भन्ने हुन्छ ।आज हामी यस्ता तस्वीर देखाउँदै छौ । जुन दुनियाँकै सबैभन्दा छा:डा बिबाह भनिएको छ । र इन्टरनेटमा सबैभन्दा भाईरल छन् । दुनियाँले सेयर गरेका तस्वीर आखिर कस्ता छन् त यहाँ अपलोड गर्दैछौ । एउटा सुन्दा हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ हामीले किन बिबाह गर्छौ यसको कसरी उत्पति भएको थियो र प्रकारहरु के–के हो त जान्नुहोस आज बिबाहको बारेमा केहि रोचक र अनौठो कुराहरु यस्ता छन् । मानव जीवनलाई आदर्श रुपमा सञ्चालन गर्न विवाहको चलन सुरु भएको हो । आफ्नो सम्पत्ति अरुलाई दान दिँदा विधिपूर्वक दिने चलनजस्तै कन्याका पिताले आफ्नी छोरीलाई धार्मिक विधि अपनाएर कुमारको हातमा सुम्पने चलन चलेको हो ।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
पुरातनकालमा भने विवाहको चलन थिएन । विवाहको चलनबारे हाम्रा पुराणमा एउटा रोचक कथा पाइन्छ । ऋषि उद्दालकका छोराकी पत्नीलाई कुनै बलियो व्यक्तिले जबर्जस्ती लैजान बल गर्यो । यो देखेर उद्दालकले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उद्दालकका छोरा श्वेतकेतुलाई आफ्नी आमामाथि बलजफ्ती भएको मन परेन । उनले त्यसको प्रतिकार गरे । उद्दालकले छोरालाई भने, ‘नरोक, यो हाम्रो पहिलेदेखिकै सामाजिक परम्:परा हो ।’ यस घटनाले श्वेतकेतुलाई यति असर गर्यो कि पछि उनले जबरजस्ती अर्कालाई उठाउने व्यवस्था अन्त्य गरे ।
उनले एक पत्नी–एक पतिको व्यवस्थाको पैरवी गरे । अर्को एउटा प्रसङ्गअनुसार दीर्घतमस नाम गरेका ऋषि थिए । उनी जन्मान्ध थिए । उनको निरङ्कुश यौ:नाचारको बानी सहन नसकेर पत्नीले उनलाई त्यागिन् । यो देखेर दीर्घतमसले महिलाले श्रीमान्लाई छो:ड्न नहुने नियम बनाए । यी सबै घटनामा प:तिपत्:नीको अनिवार्यता देखिए पनि विवाह र धार्मिक क्रिया जोडिएका थिएनन् ।
पत्नीको महत्व कति हुन्छ भन्ने झल्काउनका लागि रामायणको एउटा कथा रोचक छ । रामले जीवनमा सीताबाहेक कसैसँग वि:वाह गरेनन् । सीतालाई पवित्रताको नाममा जंग:ल छाडेपछि भएको अश्वमेध यज्ञ पूरा हुन सकेन । उनले सीताको प्रतिमा बनाएर यज्ञ पूरा गरे ।
महाभारत कालसम्म आइपुग्दा चार वर्णाश्रमको व्यवस्था भइसकेको देखिन्छ । महाभारतको आदिपर्वमा आश्रमधर्म र पतिव्रतधर्मका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
शिक्षा ग्रहण गर्न गुरुगुल जाने र त्यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम सकिएपछि धार्मिक विधिअनुसार वि:वाह गर्ने चलन चल्यो । विवाह एउटा संस्कारवान् व्यक्तिका लागि अनिवार्य मानिन थालियो । दुई आत्माको पवित्र बन्धनको रुपमा लिन थालियो । मनुष्य अवि:वाहित हुँदासम्म अ:धुरो भएको मानिन थालियो ।
फिसोन, टेलर आदि पश्चिमी विद्वानका अनुसार विविध व्यापार र बन्दोबस्तीबाट अकूत सम्पत्ति जम्मा हुन थालेपछि मात्रै एउटा पुरुषले धेरै पत्;नी राख्ने चलन विकसित भयो । सम्पत्तिमा दा:बी विरो:धका किचलो उठ्न थालेपछि मात्रै एउटी पत्नीसँग धार्मिक विवाह गर्ने, सम्पत्तिको हकदार धर्मपत्नीका सन्तानको मात्र हुनेजस्ता नियम थपिन थाल्यो । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
Previous यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले यसरी बेचौं !
Next मोबाइल हरायो ? एक मिनेट मै यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ ! एकपटक अवस्य पढ्नुहोस –